Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड - तपाईं खरीद ई-skateboards अघि यी कुरा थाहा हुनुपर्छ
तपाईं खरीद ई-skateboards अघि यी कुरा थाहा हुनुपर्छ
के प्रश्न विचार गर्नुपर्छ? को पाठ्यक्रम यसको सुरक्षा। तसर्थ, हामी Koowheel बिजुली skateboards आपूर्तिकर्ता इस्वी संवत्, RoHS, एफसीसी UN38.3 प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेका छन्। सिर्फ एक कार वा बाइक जस्तै, यी बिजुली skateboards अतिरिक्त सहज चलाउन इरादा संग तरिकाले-कायम हुनुपर्छ। यदि यो शायद तपाईं अहिले सम्म अप देखेका छौँ कि बिजुली skateboards हरेक जस्तो देखिदैन। त्यही विचार अब उकालो चढेर जस्तै सामान्य बोर्ड मा तिनीहरूले गर्न सक्छन् केही कुराहरू के skaters अनुमति, पनि skateboards जस्तै मुद्दाहरू पनि लागू हुन्छ। अहिले म यो विशिष्ट स्केटबोर्ड यो भित्र सानो मोटर छ अंदाजा गर्नुभएको केही हुँ। ब्याट्री, तैपनि तैपनि को बहुमत एउटा सीमित कारक हुन थाल्छ सुशील बिजुली स्केटबोर्डडिजाइन। पहिल्यै आफ्नो बिजुली स्केटबोर्ड सडक मा यात्रा गर्न व्यवस्थाको विरुद्ध हुनेछ फेला पारेका गर्ने ग्राहकहरु आफ्नो प्रिअर्डरको रद्द गरियो। रोटो-ब्यान्ड स्केटबोर्ड आपूर्तिकर्ता ( Koowheel ब्रान्ड) को lightest, तेज, र सबै भन्दा उच्च बिजुली ग्रह मा स्केटबोर्ड दाबी। यहाँ हामी बिजुली skateboards प्रयोग कसरी सुरक्षित बनाउन केही सुझाव प्रदान।
त्यहाँ केही साँच्चै सुन्दर बिजुली skateboards बजार मा र तिनीहरूलाई केही एकदम ingeniously विकास छन्। त्यहाँ skateboards छन्। सीमा - दौरा काम वा संकाय दस मिनेट केवल लिन्छ गर्न भने तपाईं त यो संग कुनै पनि मुद्दा छ देखि सबै भन्दा skateboards एक लागत मा यो कवर गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन। आपूर्ति गर्न कटिबद्ध छन् जो दुई skater Pals द्वारा आधारित राम्रो बिजुली स्केटबोर्ड यो ग्रह मा, Koowheel बोर्डहरू बिजुली skateboards को क्षेत्र मा नेता हुन्। यो बोर्ड फरक बोर्डहरू छैन पनि सजिलो संग को सपना गर्न सक्ने मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्ने, बंद-राजमार्ग भू-भाग मा आश्चर्यजनक ठीक गर्छ। सामान्यतया एक बडा कमी केभी मोटर यो धेरै ठीक मेरो मामला र climes पहाड थियो र सस्ता विकल्प छ, पर्याप्त छ। के तपाईं एक लागि किनमेल भन्दा पहिले विचार गर्न छ? यो छ तेज बिजुली स्केटबोर्ड यो पनि अति कोमल छ। कसरी यो यति थोरै छ सक्छन्? यो संभवतः 30 मी / घन्टा को एक गति सँगै प्रतिस्थापन ब्याट्री प्याक संग पुग्न र हुन सक्छ, 2pcs ब्याट्री पैक, पछिल्लो गर्न सक्छन् 60 किमि लामो जानुहोस्।
को को एक निर्धारण गर्न प्रभावकारी तरिका के हो राम्रो बिजुली स्केटबोर्ड सवार, बच्चाहरु र वयस्क लागि? तपाईं वयस्क उद्देश्य छ यो बिजुली स्केटबोर्ड बताउँछ अर्को कल्पना मोटर को दर्जा दिइएको उत्पादन ऊर्जा छ। यो एक हो इलेक्ट्रोनिक स्केटबोर्ड एक विद्युत मोटर रिमोट प्रयोग भएको छ जो संग प्रदान गरिएको छ कि। टाढाको तर यसलाई सञ्चालन गर्न सरल छ, प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। सजिलो प्रयोग-गर्न-टाढा व्यवस्थापन एक सजिलो प्रवेग अनुमति दिनुभएको छ - र पनि तपाईं पछिल्तिर मोडमा सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो!
पोस्ट समय: Mar-09-2018